Somaliland: Wasiirka Qorshaynta oo Madaxweynaha uga Mahad-celiyay Masuuliyiin uu Magacaabay - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasiirka Qorshaynta oo Madaxweynaha uga Mahad-celiyay Masuuliyiin uu Magacaabay
Wasiirka cusub ee wasaaradda qorshaynta qaranka iyo horumarinta Somaliland Maxamed Ibraahim Aadan (Qabyo-tire), ayaa uga mahad celiyay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo xilka wasiirnimo ee uu u magacaabay.
Waxaanu Wasiirku balan-qaaday in uu sida ugu wanaagsan u gudan doono hawsha qaran ee loo xil-saaray, isagoo geesta kale-na madaxweyne Siilaanyo ku amaanay masuuliyiinta culus ee dhawaan xukuumadiisa ku soo kordhiyay.Wasiir Qabyo-tire, waxa uu sidaasi ka sheegay hadal uu ka jeediyay munaasibad qado sharaf ah oo uu maanta hudheelka Hadhwanaag ee magaaladda Hargaysa ku qaabilay masuuliyiinta ka tirsan xukuumada, hogaanka dhaqanka, aqoon yahanka iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Hawd, “Marka hore waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriaydda Somaliland mudane Axmed Maxamed Siilaanyo oo aan ugu mahad celinayo inuu inoo magacaabay wasiirradii ugu badnaa intii uu xilka hayay. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu inoo magacaabay hay’adihii dawlada ee ugu wanaagsanaa,”ayuu yidhi Wasiirka Qorshayntu.
Isagoo ka warbixinayay u jeeddada kulanka qadadda ah, waxa uu yidhi “Intaas kadib munaasibadan aan idiin qabtay waxay daaranayd in aan isku duubnidii reerka iskaga nimaad-no oo aan is aragno, rag badan oo mudo iska soo horjeeday, oo aan wax wadaagin, oo aan is arag ayaa jira, tafaraaruqa jira ee la iska daba maray inuu jiro waan dareensanaa, anigoo Burco jooga. Waxaanan doonayaa in aan hormood ka noqdo inta itaalkayga ah, oo aan reerka meel iskugu keeno. Waanan ka mahad celinayaa cid kastoo soo ajiibtay marti-qaadkaygan.”
Sidoo kalena wuxuu ka waramay sida loogu baahan yahay in beeshiisu ay si buuxda u taageerto xisbiga KULMIYE. “Maanta nin waliba wuu arkayaa halka uu roobku ku da’ayo iyo halka uu hayo, halka aynu u rarrayno waynu ognahay, oo waynu ugu badanahay maanta, waana halkaas aynu ku faraxsanahay ee aynu maanta wada joogno, sidaas ayaynu isku og-nahay oo aynu isku hogaaminaynaa. Gobollada Bari ayaan ka imid, waxaana yaala dad badan oo degaanka dhib badan ayaana ka jirta, waxaanan ILLAAHAY (SWT) inoo waydiinayaa inuu dhibtaas inaga soo furto”ayuu yidhi wasiir Qabyo-tire.
Wasiirka Diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed, oo isna ka hadlay munaasibadaasi waxa uu yidhi “Waxaan u mahad celinayaa wasiirka cusub ee qorshaynta oo magacaabidiisu sabab u noqotay inaynu midaysnaano oo midawno kana baxno tafaraaruqii.” Sidoo kale suldaanka guud ee beelaha gobolada Hawd iyo Hargeysa suldaan Cumar Suldaan Maxamed Suldaan Faarax oo ka hadlay munaasibadan ayaa ka hadlay hogaaminta laga doonayo masuuliyiinta cusub. “Had iyo goor cida dadka hogaaminaysa ayuun baa dadka xumaysa ama wanaajisa qur’aanka-na in badan ayaa lagaga hadlay oo inta mar walba madaxyo weynta ah ee dadka hogaaminaysa ayuunbaa jar ka tuurta ama meel wanaagsan marisa. Waxaan ILLAAHAY (SWT) ka baryayaa inaad noqotaan hogaamintii reerka midho badan u dhali lahayd” ayuu yidhi suldaan Cumar.
Suldaan Barre Xaaji Xuseen, oo isna ka hadlay munaasibadan ka hadlay ayaa amaanay wax qabadka xukuumada madaxweyne Siilaanyo iyo xukuumadiisa.Waxaanu yidhi “Waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha wixii uu ka qabtay dalka iyo sharafta ka muuqata dalka mudadii uu gacanta ku hayey, wasiirada cusub iyo wasiiradii hore-ba waan soo dhawaynayaa inay gacmaha is qabsadaan oo ay si wada jir ah hawlaha u galaan.”
Waxa kaloo isna halkaasi ka hadlay Wasiir ku xigeenka hawlaha guud Liibaan Yuusuf Gaaxnuug, wasiirka ku xigeenka waxbarashada Axmed Joqor, xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye (Nac Nac), xoghayaha fulinta dawlada hoose Axmed Derejo iyo Prof. Axmed Maxamed Cadaad iyo xubno kale.
Kuwaas oo dhamaantood soo dhaweeyay wasiirka cusub ee qorshaynta qaranka Maxamed Ibraahim Aadam(Qabyatire), iyagoo balan qaaday in ay wasiirka si buuxda ula shaqayn doonaan, isla markaana taageeradda beesha ay la garab taagan yihiin.
wasaaradda qorshaynta qaranka iyo horumarinta Somaliland
DEGDEG: Wasiirka Amniga Iyo Taliyaha Ciidammada Puntland Oo Soo Gaadhay Degmada Badhan Ee Gobolka Sanaag
Somaliland: “WADDANI ma aqbali Doono Mudo Kordhinta” Cirro